China Deep tenda lehilahy masturbator PM017 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | ANDREFANA
Vokatra Silicone Mamono
Mitsentsitra raozy tsy tantera-drano sy ...
Raozy tsy mitsahatra mitsentsitra rano ...
Feon-tsaina vaovao 2021 ...
Ny clitoris miolakolaka tsy miova st ...
Mpanadino lahy lalina amin'ny tendako PM017
Mpangotraka lalina ao anaty tenda, miaraka amin'izany ianao dia ho tia amin'ny filokana.
Model No.: PM017
Fitaovana: Silicone + ABS
Fiampangana: USB Rechargeable
Function: 10-mode vibration ary 7-mode mitroka, 42 ° hafanana tsy miova, Voicing interactive
• Mpangotraka filahiana manan-tsaina feno amin'ny minono toy ny tena blowjob.
• Fanekena ny fikikisana, fihoaram-pahefana 10-mode ary fikotrohana 7-mode, mifanaraka amin'ny filan'ny nofo samy hafa.
• Fitaovana silky toy ny hoditra, malama ary mahazo aina.
1. Miaraka amin'ny orinasa misy antsika 30,000 metatra toradroa, mahazaka olona 800-1000 andalana famokarana sy atrikasa tsy misy vovoka, ary manana teknolojia mamolavola tena.
2. traikefa amin'ny vokatra ara-pananahana 14 taona, miaraka amin'ny famatsiana loharanon-karena tsara amin'ny akora fototra sy ny motera micro-namboarina sy ny silika vita amin'ny tena, ho an'ny fifehezana ny vidiny sy fiantohana ny kalitao.
3. Fivarotana mivantana amin'ny orinasa, iray amin'ireo mpanamboatra OEM sy ODM lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny vokatra firaisana, miaraka amina vokatra 1,200 mihoatra ny safidy.
4. Voamarina amin'ny ISO9001, ary mandalo mari-pahaizana CE, ROHS & FDA.
5. Mandray anjara amin'ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena maro miaraka amin'ny valiny sy fanekena tsara.
F1: orinasa mpanamboatra na mpivarotra ve ianao?
A: Izahay no mpanamboatra mahay, miaraka amin'ny tranokala metatra toradroa 30000 sy mpiasa 400, miaraka amin'ny faritra silika vita amin'ny tena ary motera kely ho an'ny fifehezana ny vidiny sy ny fifehezana kalitao tsara kokoa, mifantoka amin'ny R&D, fanaterana ara-potoana ary fiantohana matanjaka.
F2: Afaka mahazo santionany ve aho alohan'ny hametrahana baiko?
A: Eny, afaka manome santionany maimaim-poana izahay, fa eo akaikinao ny entana. Ny ankamaroan'ny mpanjifanay vaovao dia aleony mametraka ny baiko fitsapana mivantana mba hitsapana ny fiasan'ny varotra sy ny valin'ny marketing.
F3: Inona ny ora fanaterana?
A: 10-25 andro aorian'ny fanamafisana ny baiko sy ny fahazoana ny petra-bola, indraindray ny daty fandefasana dia hiovaova amin'ny haben'ny baiko.
F4: Milamina ve ny fitaovana? Misy taratasy fanamarinana ho azy ireo?
A: Eny, mampiasa ireo fitaovana azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana izahay miaraka amin'ny silôntaly kilasy fitsaboana, tsy misy poizina ary malala-phthalate. Manana mari-pahaizana ISO 9001, RoHS, REACH ary CE ho an'ny vokatra izahay.
F5: Ahoana no hifehezana ny kalitao?
A: Manana departemanta fanaraha-maso kalitao izahay, ny dingana rehetra amin'ny vokatra dia eo ambany fifehezana, ao anatin'izany ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny fitaovana sy ny ampahany, ny fifehezana ny kalitaon'ny fidirana, ny fifehezana ny kalitao farany, ny fifehezana kalitao mivoaka.
F6: Inona ny antoka omena anao?
A: Fifanakalozana maimaimpoana ary miverina antoka raha miverina manana olana kalitao ianao! Ary tompon'andraikitra amin'ny entana rehetra fandefasana entana ianao, mifandraisa aminay alohan'ny hiverenanao.
F7: Inona avy ireo karazana teny fandoavam-bola ekenao?
A: Paypal, T / T, Western Union, Alibaba no hita eo.
F8: Manohana OEM ve ianao?
A: Eny manohana OEM & ODM izahay, manana atrikasa famolavolana ho an'ny fampandrosoana vokatra vaovao haingana izahay. Manodidina ny 25 andro ho an'ny entana silika vaovao ary 40 andro ho an'ny entana plastika. Ny MOQ dia 500p -10,00pcs mifototra amin'ny vokatra samihafa. Indraindray, ny habetsahana kely eo ambanin'ny 500pcs dia ekena ihany koa raha misy ny tahiry.
Teo aloha: Kilalao firaisana ara-nofo VV016 olon-dehibe, Vibrator firaisana ara-nofo amin'ny zazavavy
Manaraka: Masturbator lehilahy maoderina sy matevina miaraka amina vibration 10-mode, mitsentsitra ary mamono PM066
8 hafainganam-pandeha sililety dildo miaraka amin'ny savoka vibrator V ...
Mainty firaisana ara-nofo lahy Penis artifisialy Penis lehibe Dick Co ...
Rano-haben'ny rano-hafafiny sy mihodina Dildo V ...
Fanamafisam-peo vibrator ho an'ny lehilahy ...
Dildo mamafy rano lehibe amin'ny tanana VS874